एउटा विद्यालयलाई आएको बजेट नगरपालिकाले अर्कोलाई दिएपछि...
बारा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत केन्द्रस्तरको कार्यक्रमबाट विद्यालय भवन निर्माणका लागि पठाएको अनुदान रकममा निजगढ नगरपालिकाले लापरबाही गरेको छ । मन्त्रालयले एउटा विद्यालयलाई पठाएको रकम नगरपालिकाले अर्को विद्यालयलाई चेक काटेको हो ।
मन्त्रालयले बाराको निजगढ–८, बजारस्थित गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालयलाई पठाएको १६ लाख अनुदान रकम निजगढ–६, सडकटोलको गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालयको नाममा चेक बनाएको हो । अनुदानका लागि जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ बाराले असार २० मा सिफारिश गरेको थियो । बजारस्थित गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केदारप्रसाद गौतमले नगरपालिकाले प्रमाण पेश गर्दागर्दै पनि अर्को विद्यालयलाई चेक काटेको गुनासो गरे ।
‘मन्त्रालयबाट असार ३० गते जानकारी पाएपछि भोलिपल्टै नगरपालिकामा पुगेर निवेदन दिएका थियौं,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘अर्को विद्यालयले पनि केही घण्टापछि पुगेर रकम दाबी गरेपछि नगरपालिकाले साँझ सिफारिश नै नभएको विद्यालयलाई चेक काटेको छ ।’ विद्यालयले जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइको सिफारिशबारे नगरपालिकालाई पत्र पेश गर्दा पनि रकम नपाएपछि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पत्र समेत नगरपालिकामा पेश गरेको छ । केन्द्रका शाखा अधिकृत रामचन्द्र शर्माले अनुदानबारे निजगढ नगरपालिकालाई पत्र पठाएका हुन् । पत्र नगरपालिकामा साउन १७ गते नै दर्ता गरिएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशकसेन ढकालले विभागबाट पत्र आएको बताउँदै अब वडा नं. ८ को गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालयमा रकम सार्ने प्रक्रिया शुरू भएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा रकम निकासा गरेकाले समस्या भएको बताए । ‘जतिबेला दुई कोठे भवन निर्माण गर्न निकासा भयो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले भने, ‘चेक काट्न अन्तिम बेला भएको थियो, त्यसबेला रकम निकासा गर्न तानातान भएपछि नगरपालिकाले ६ नं. वडाको विद्यालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।’ रकम निकासा हुँदा वडा खुलाइएको थिएन, अहिले उताबाट पत्र आएपछि सार्ने निर्णय हुन्छ ।
चेक काट्ने विषयमा नगरपालिकामा मेयर सुरेश कुमार खनाल, उपमेयर लीलादेवी लामिछानेसहित दुवै विद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल भएको थियो । बाराको निजगढमा एउटै नाम गरेको तीनओटा शैक्षिक संस्था छन् । एउटा गौरीशंकर क्याम्पस र दुईटा गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालय छन् । मन्त्रालयले बाराको कलैयास्थित त्रिचन्द्र माध्यमिक विद्यालय र निजगढको गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालयलाई अनुदान पठाएको थियो ।
आईसर ट्रक दुर्घटना हुँदा कम्तिमा ६ जनाको मृत्यु[२०७६ माघ, ७]
नबिल बैंक र आईसीएफसी फाइनान्सलाई ऋणपत्र जारी गर्न बोर्डको अनुमति[२०७६ माघ, ७]
सिभिल लघुवित्तले हकप्रद शेयर जारी गर्न सेबोनमा दियो निवेदन[२०७६ माघ, ७]
युनाईटेड फाइनान्सले गर्‍यो नगद लाभांश बैंक खातामा जम्मा[२०७६ माघ, ७]
पुस मसान्त सम्ममा सिनर्जी पावरको नाफा ६ करोड ६८ लाख [२०७६ माघ, ७]
राजविराजबाट हप्ताको सातै दिन हवाई सेवा सञ्चालन हुँदै[२०७६ माघ, ७]
धनुषाका अधिकांश स्थानीय तहको अनुदान कटौती [२०७६ माघ, ७]